အော်စကာဆုပေးပွဲ အခမ်းအနားတင်ဆက်သူအဖြစ်မှ နှုတ်ထွက်လိုက်တဲ့ Kevin Hart – SoShwe
Home/Entertainment/အော်စကာဆုပေးပွဲ အခမ်းအနားတင်ဆက်သူအဖြစ်မှ နှုတ်ထွက်လိုက်တဲ့ Kevin Hart
အော်စကာဆုပေးပွဲ အခမ်းအနားတင်ဆက်သူအဖြစ်မှ နှုတ်ထွက်လိုက်တဲ့ Kevin Hart
admin December 7, 2018	Entertainment Leaveacomment
Kevin Hart ဟာ လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်အချို့က Twitter မှာ လိင်တူဆက်ဆံသူတွေနဲ့ လိင်နှစ်မျိုးလုံးအပေါ် သာယာနေသူတွေကိုပါ ရွံရှာမုန်းတီးကြောင်း ရေးသားခဲ့ခြင်းကြောင့် အငြင်းပွားမှုတွေဖြစ်ပွားပြီး အော်စကာဆုပေးပွဲ အခမ်းအနားတင်ဆက်သူအဖြစ်မှ နှုတ်ထွက်လိုက်ပါတယ်။
“ ကျွန်တော် ဒီနှစ် အော်စကာပေးပွဲအခမ်းအနားတင်ဆက်သူအဖြစ်မှ နှုတ်ထွက်လိုက်ပါတယ်။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ ကျွန်တော့်အနေနဲ့ အရည်အချင်းရှိပြီး ထူးချွန်ပြောင်မြောက်ကြတဲ့ အနုပညာရှင်တွေကို ဆုချီးမြှင့်တဲ့ညမှာ သူတို့ကို စိတ်မပျက်စေချင်လို့ပါပဲ . . . ” ဆိုပြီး သူ့ရဲ့ Twitter မှာ မနေ့ညက ရေးသားခဲ့ပါတယ်။ ဆက်လက်ပြီး သူကပဲ “ ကျွန်တော့်အနေနဲ့ LGBT အဖွဲ့အစည်းက တာဝန်ရှိသူတွေ အားလုံးကို အရင်က ဖြစ်ပျက်ခဲ့တဲ့ ကိစ္စရပ်တွေနဲ့ပက်သက်ပြီး အနူးအညွတ် တောင်းပန်ပါတယ် . . .” ဆိုပြီး Twitter မှာပဲ ဆက်လက်ရေးသားခဲ့ပါတယ်။
Previous Gigi Hadid အကြောက်ဆုံးအရာက ဘာဖြစ်မလဲ ? ? ?
Next ၂၀၁၈ခုနှစ်အတွင်း Instagram တွင် Follower အများဆုံး Celebrity များ။